विचित्र संसार Archives - Kailari Online
जब एउटै प्रेमीसँग भागे दुईजना युवती
प्रेममा मान्छे अन्धो हुन्छ भनिन्छ । सायद त्यहीँ भएर होला दुईजना युवतीहरु एउटै प्रेमीसँग भाग्न तयार भए । यो मामिला तबमात्र बाहिर आयो, जब त्यो प्रेमीले केही समयको मस्तीपछि दुईमध्ये एक प्रेमिकालाई रेलभित्रै छाडिदियो । अनि रेलभित्रै एउटा अनौठो त्रिकोणीय…Read more
न्युजिल्याण्डको माओरी समुदायमा चिच्याएर गरिन्छ पाहुनाको स्वागत
पाहुनलाई स्वागत गर्ने तरिका पनि कस्तो ? न्युजिल्याण्डको माओरी समुदायमा पाहुनालाई स्वागत गर्ने संस्कारले तपाइँलाई साँच्चीकै आश्चर्यमा पार्नेछ । उनीहरुको स्वागत गर्ने शैली नबुझेकाहरु त सायद पहिलो चोटी त्यहाँ जाँदा डराएर भाग्न बेर छैन । किनकि माओरी समुदायका मानिसहरु पाहुनाको…Read more
अमेरिकमा चिया बेचेर महिलाले कमाइन् साढे ३ अर्ब
एकजना अमेरिकी महिला भारत आइन् । भारतमा आएर चियाको पारखी भएर देश फर्किइन् । अमेरिका गएपछि उनले गाडीको चिया पकाएर बेच्ने पार्टटाइम काम सुरु गरिन् । उनको चिया पसल यति चल्यो की उनी चियाबाटै करोडपति बनेकी छिन् । ती महिलाको…Read more
लोग्नेको रोटीप्रेमका कारण पत्नीले मागिन् डिभोर्स !
विवाहित जोडीको सम्बन्ध विच्छेद हुनका लागि कुनै गम्भीर कारण नै चाहिन्छ भन्ने सोँच्नुभएको छ भने तपाइँ गलत हुनुहुन्छ । कहिलेकाहीँ यस्ता उटपट्याङ कारणले गर्दा लोग्नेस्वास्नीको डिभोर्स हुँदो रहेछ, सुन्दैमा अचम्म परिन्छ । भारतको महाराष्ट्रस्थित पूणे सहरमा एकजना महिलाले आफ्नो लोग्नेसँग…Read more
तपाईंलाई लाग्दो हो कुनै काल्पनिक कुरा हुँदैछ वा अपवादका विषय उठाइएको छ । तर यस्तो विल्कुल होइन । एउटा अनुसन्धानले के देखाएको छ भने अब आउने दशकहरुमा मानिसको आयू १ सय ४० वर्षसम्म पुग्नेवाला छ । चिकित्सा क्षेत्रमा भइरहेको लगातारको…Read more
कण्डम उत्पादक कम्पनीहरुले मार्केटिङका लागि केही न केही प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । कहिले नयाँ नयाँ प्रकारका माध्यमबाट त कहिले अनौठो फ्लेवरबाट । चकलेट, बटर स्कच, स्ट्रबेरी जस्ता फ्लेवरको कण्डमले यसअघि नै बजारमा धमाका पिटिसकेका छन् । कण्डम उत्पादक कम्पनी मेनफोर्सले…Read more
१० दिनअघि मरिसकेकी एकजना महिलाले बच्चा जन्माएको खबरले दक्षिण अफ्रिकामा तहल्का मच्चाएको छ । १० दिन पहिले मृत्यु भएकी महिलाको अन्त्येष्टिका लागि कफिन खोल्ने क्रममा महिलाको शवसँगै नाबालक शिशुको शव समेत देखिएपछि महिलाले मृत्युपछि बच्चा जन्माएको खुलासा भएको हो ।…Read more
महिलाको रजश्वला चक्रका सम्बन्धमा समाजका रहेका विभिन्न खाले मान्यताहरुलाई चिर्नका लागि एक अष्ट्रेलियन युवतीले अनौठो उपाय अपनाइन् । अष्ट्रेलियाकी २६ वर्षीया याजमिना जेदले जुन कदम उठाइन्, त्यसले अहिले एकाएक चर्चा कमाएको छ । उनले आफ्नै रजश्वलाको रगत अनुहारमा पोतेर सेल्फी…Read more
आकाशबाट एकाएक किन बर्सिए चमेरा ?
आकाशबाट माछा तथा भ्यागुता बर्सिएका खबर त बेलाबेलामा सुन्ने गरिएकै छ । तर अष्ट्रेलियामा चाहीँ यो पटक चमेराको वर्षा भएको छ । चमेराको वर्षासँगै मानिसहरु त्रसित भए । तर वैज्ञानिकहरुले चाहीँ भयभित नहुन आग्रह गर्दै चमेराको वर्षा हुनुको कारण खोलिदिएका…Read more